Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ọbịa ọbịa » Ikike na ọrụ nke nwatakịrị nọ n'ogige
Dị ka ndị nne na nna, anyị na-enwe nchegbu mgbe nile maka ntolite nke ụmụ anyị. Anyị na-achọ mgbe niile ịhụ ka ha na-enwe ụdị ihe kacha mma dị ka o kwere mee. Agbanyeghị, ụlọ akwụkwọ enweghị ike ịkụziri ha ihe niile ahụ. Enwere oge mgbe ụmụaka anyị kwesịrị ịhụ ihe site n'onwe ha wee ghọta ikike ha. Nke a bụ kpọmkwem ihe mere e ji guzobe ogige ụmụaka.
Newtonshow: Ogige Sayensị na Singapore
Anyị niile maara na ụmụaka na-achọsi ike mgbe niile ma na-enwe mmasị inyocha. Ha na-ahụ nchọnchọ n'anya nke ukwuu nke na ha nwere ike ime ka iwe nweta ihe ha chọrọ. Ma, dị ka nne ma ọ bụ nna, anyị apụghị nnọọ inye ihe ha chọrọ n’ụzọ dị mfe, karịsịa mgbe ọ na-adabaghị ha. Na Kids Camp na Singapore, ha ga-enwe ahụmịhe ha chọrọ iji mezuo mmepe ha.
Nke mbụ, ogige ụmụaka bụ ebe ụmụaka na-esonye iji mụta ụdị ihe dị iche iche. Ọ bụ ebe ha nwere ike ịmepụta ezigbo enyi, mara mkpa okike na ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị banyere n'otu ogige mgbe ị bụ nwata, ị nwere ike icheta na ọ na-enye afọ ojuju iji naanị gị gbaa ọkụ na nke mbụ ya. Enwere ike inwe oge mgbe ị mụtara igwu mmiri na mmiri Ụlọ akwụkwọ sayensị na Singapore. Yabụ na ị na-ahụ, ọ bụ ezigbo ngwugwu ahụmịhe nke nwatakịrị ọ bụla chọrọ.
Ihe kpatara ị ga-eji tụkwasị obi n'ogige sayensị na Singapore
Nke mbụ, Kids Camp na Singapore nwere ike ọ gaghị adị oke mma dịka ụlọ akwụkwọ iji kuzie nhata quadratic na ụtọ asụsụ. Ọ bụghị ebe a na-akụzi okwu nkọwa. Otú ọ dị, ọ bụ ebe ịzụlite àgwà, sayensị na mmepe nke nwa gị. Ogige ndị nwere ike ọ gaghị enwe ike iduzi ọmụmụ ihe mmụta dị omimi, mana ọ na-akụzi omume ọma, ụkpụrụ, na nkà ihe ọmụma. Ya mere, ị nwere ike nweere onwe gị inyefe anyị n'aka ntolite nke nwa gị.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-enwe obi abụọ banyere isonye na nwa gị na Kids Camp n'ihi nchekwa, ọ dịghị ihe na ị kwesịrị ị na-echegbu onwe ya. Biko cheta na ogige ndị pụrụ iche maka ụmụaka - yabụ na ọ nweghị nsogbu na ihe egwu maka gị ichegbu onwe gị. Enwere ndị ọrụ zuru oke iji nabata ma nabata nwa ọ bụla. Ọzọkwa, ha abụghị naanị ụdị ọrụ ọ bụla, mana ndị ọkachamara. A zụrụ ndị ọrụ nọ n'ogige ahụ nke ọma n'ịduzi ụdị ụmụaka ọ bụla.
Gịnị bụ ikike na ọrụ nke nwatakịrị nọ n'ogige
Ebe ọ bụ na ị nwere ike na-echegbu onwe gị maka ọgwụgwọ nke ogige n'ebe nwa gị nọ, anyị kwadebere ndepụta nke ikike na ọrụ nke ụmụaka nọ n'ogige ka ị ghọta.
Ebe ogige ahụ dị mma
Nke a bụ n'ezie "kwesịrị" maka ụdị ogige ọ bụla. Nke mbụ, ọ bụghị nanị na a na-akwado ogige ndị ahụ na mberede. A haziri nke ọma ma mee ka onye ọ bụla nwee obi ụtọ n'ogige ahụ n'atụghị egwu egwu. Ọnọdụ nke ogige ahụ na-adị mgbe niile na ebe nchekwa nke ndị ọrụ na ụmụaka nwere ike ịnweta. N'ihe gbasara ihe egwu ahụike, enwekwara ọkwa ịdị ọcha dị elu na atụmatụ ụmụaka ụmụaka na Singapore.
Ụmụaka nweere onwe ha ikwupụta na ịhọrọ.
Ebe ọ bụ na ogige ahụ bụ maka inye ụmụaka mmepe dị mkpa, ọ bụ naanị ihe kwesịrị ekwesị inye ha nnwere onwe ikwupụta na ịhọrọ. Site n'ime otú ahụ, ha ga-echebakwu echiche nke ọma banyere mkpebi ọ bụla ha mere. Ha ga-azụlitekwa echiche nke nyocha na mmuo n'ime oge niile a na-eme. Ikike na ọrụ a dị na ogige ọ bụla dịka ọ bụ iwu n'ozuzu ya.
Onye ọ bụla kwesịrị ịkwanyere ndị ọzọ ùgwù.
Ndịiche abụghị ihe mgbochi na mmụta. N'ogige, a na-atụ anya na a ga-enwe ndịiche na ụmụaka. Ụfọdụ nwere ike ịbụ ndị si n'agbụrụ, ụcha, na nkwenkwe dị iche iche, ma ọ bụghị ihe mere a ga-eji na-akwanyere ha ùgwù. N'ezie, ogige ga-enyere nwa gị aka ịghọta ụdị ọ bụla dị iche iche na-asọpụrụ ha. Nke a ga-enyere ụmụaka nọ na Newtonshow aka ịzụlite omume ọma ha, mana ọ ga-enyekwara ọgbọ na-abịa n'ihu aka maka ezighi ezi nke ịkọ nkọ.
Ekwesịrị inwe nkasi obi.
Ọ bụ ezie na ogige jupụtara na mmega ahụ, ụmụaka ka kwesịrị inwe ike ịchọta nkasi obi ha. Ihe dị mma bụ na ogige ndị a kwadebere nke ọma iji nye nwa gị nkasi obi kacha mma n'ụzọ dị iche iche. O nwere ike ịbụ n'anụ ahụ, mmetụta uche, na ọbụna n'etiti ọha mmadụ. N'anụ ahụ, n'ihi na ha ga-enwe ebe obibi dị mma; N'ụzọ mmetụta uche, ha ga-azụlite mmetụta nke njikọ n'ogige; Na-elekọta mmadụ, n'ihi na ha ga-ahụ ndị nwere ntụsara ahụ gburugburu ha.
O kwesịrị ịbụ ebe dị mma.
Ọzọ, nke a bụ ikike dị mkpa mana ọ bụ otu n'ime ihe kacha mkpa. Gburugburu ebe obibi na ogige ekwesịghị iweta ụdị ahụ erughị ala na nsi ọ bụla na ahụmịhe nwa gị. Ọ bụ ya mere e ji hazie ya nke ọma iji zere ụdị mmerụ ahụ niile. Ma mgbe ọ na-ekwu na ahụike, ọ dịghị mkpa maka okomoko ọ bụla. Ọ kwesịrị ịbụ naanị ụdị ebe nkasi obi. Nke a bụ ihe mere ị ga-eji nwee obi ike n'imebata nwa gị n'ime ogige.
Ekwesịrị ịkwado ụmụaka.
Ụmụaka enweghị ahụmahụ ná ndụ, ha na-adaberekwa ná mkpebi ndị mụrụ ha na-eme. Otú ọ dị, nke a apụtaghị na ndị nne na nna nwere ike ime ka nwa ha na-agagharị dị ka chess. Ọ pụtara nnọọ na ndị nne na nna kwesịrị ịbụ ndị na-ahụ maka nduzi na ịkwado ụmụ ha. N'ụzọ dị otú ahụ, ụmụaka ga-enwe ike ịchọta mmasị ha na ndụ. Ikekwe ha na-enwe mmasị n'ezie ịbụ onye edemede otu ụbọchị, ma ọ bụ ikekwe onye na-eme egwuregwu. Ya mere, ndị nne na nna ekwesịghị igbochi ụmụ ha na nrọ dị mma ha kama ịkwado ha.
Nwa ọ bụla kwesịrị ịhụ nwata ha site na igwu egwu na iri nri ha chọrọ. Ha nwere ike na-egwu egwu na mmiri ozuzo, apịtị na ahịhịa ka ọ dị ha ka nwata. Agbanyeghị, oge na-abịa mgbe ha kwesịrị inwe nkwalite. Newtonshow nọ ebe a iji nye mmepe ụmụaka chọrọ n'ịchọgharị, ịhụta na imekọrịta ihe.
Ọ dịghị ihe dị ụtọ karịa ịhụ ka ụmụ anyị na-eto eto ka ha bụrụ ụdị kachasị mma nke onwe ha dịka nne na nna. Ya mere, itinye ha n'ogige ahụ ga-eme ma ọ bụrụ na ọ dị gị ka ọ dị mkpa ka ha mejupụta nleba anya na ahụmahụ anụ ahụ. Ebe ọ bụ na e nyere ha ọrụ ụfọdụ na ikike ụfọdụ, ọ dịghị ihe ga-enye anyị nsogbu n’obi. Naanị ihe anyị kwesịrị ichebara echiche bụ nkwadebe maka ịnabata ha azụ azụ.